Home | आर्थिक समाचार
माछापोखरीमा मुक्तिनाथको शाखा विस्तार
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले देशैभरि आफ्ना शाखा सञ्जालहरू विस्तार गर्ने क्रममा काठमाडांै महानगरपालिका–१६, माछापोखरीमा आफ्नो शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ ।
आइएमईको व्यावसायिक यात्रा समाविष्ट पुस्तक अनावरण
काठमाडौं । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र युएनसीडीएफको संयुक्त पहलमा प्रकाशित आइएमईको व्यावसायीक यात्रा समाविष्ट पुस्तक र भिडियो शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकावीच अनावरण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल,
एनसेलद्वारा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान
काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, केन्द्रियक्याम्पस पुल्चोकमाविभिन्नतीन संकायमाअध्ययन गरीरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई एनसेल छात्रवृत्तितथाउत्कृष्टता सम्मानप्रदान गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंक आइएमई पे वालेटमा आवद्ध
काठमाडौं । आइएमई पेका सेवाग्राहीहरूले अबदेखि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा लिङ्क गरि आइएमई पे वालेटमा सिधैं रकमान्तर गर्न सक्ने भएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि अहम भूमिका तथा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रारुप अनुरुप पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेअनुसार डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटी, सैद्धान्तिक सहमति एवम् सिफारिश समितिका पदाधिकारीहरुलगायत
ग्रामीण क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक, शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा शुरु
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, ३१ बैसाख । अव्यवस्थित बसोबासका रुपमा रहेका १८ हजार जनसंख्या भएको ग्रामीण क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड बुटवलले आफ्नो ८०औं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको छ ।
लक्ष्मी बैंकको थप दुई शाखा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने क्रममा थप दुई शाखा संचालन गरेको छ ।
एनसेल थ्रिजी ५४ प्रतिशत जनसंख्यामा
काठमाडौं, २५ बैशाख । एनसेलले आफ्नो थ्रिजी सेवा कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्याएको छ । कम्पनीको प्रमुख लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र स्टार हस्पिटलीबच नगदरहित सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र स्टार हस्पिटलबीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव महाप्रबन्धक पवन थापा र स्टार हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक डा. शैल रुपाखेतीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एनआइसी एसियाको शाखारहित सेवा विस्तार
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकले आफ्नो शाखारहित सेवामा विस्तार गरेको छ । बैंकले काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित भत्केपाटीमा सेवा विस्तार गरेको छ ।
एनएमबी बैंकको नाफामा वृद्धि
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा नाफामा वृद्धि गरेको छ । बैंकले एक अर्ब ४६ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ ।